Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2014 → avril → 8 → Fanafihana ny Accès Banque sy ny perception Analamahitsy : Jiolahy 11 tratra niaraka tamina basy 3 sy bala
Ravan’ny mpitandro filaminana ny andian-jiolahy nampihorohoro teto an-drenivohitra nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taona
Nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety teny Ankadilalana ny mpitandro filaminana miandraikitra ny famotorana momba ireo fanafihan-jiolahy niseho teto an-drenivohitra herinandro maromaro lasa izay. Nahazo vaovao izy ireo fa misy olona mipetraka eny Antanandrano mampiahiahy. Nandeha teny an-toerana ny mpitandro filaminana nanao ny fisavana.Tratra tao an-tranon’io olona io tamin’izany ny basy PATT, basy Makarov, PA MAK, grenady vita sovietika roa ary basy Kalachnikov. Marihina fa ilay laharana very teny amin’ny tranon’ny Gal Ramananarivo Mandroseza ity kalach hita ity.
Nampiasain’ireo jiolahy tamin’ny fanafihana maro toy ny teny amin’ny Accès banque Andavamamba, ny fanafihana ny Hôtel Pacifique tetsy Ambodifilao ary ny farany teo dia ny fanafihana ny “perception principale” Analamahitsy. Nisy bala maromaro ihany koa tratra niaraka tamin’ireo fitaovam-piadiana ireo.
Jiolahy iray tratra no nanoro ireto namany folo izay marihina ihany fa nisy miaramila ny iray tamin’izy ireo. Matihanina tokoa izy ireto raha ny fitantaran’ ireo voasambotra, satria efa manana mpanome vaovao amin’ny fanafihana izay ataony ka volabe hatrany vao manao ny fanatanterahana ny asa ratsiny.
Omaly alatsinainy no natolotra ny fitsarana ireo olona ireo.
Mbola hanentanan’ireo mpitandro ny filaminana hatrany ho an’ireo izay olona mahita toe-javatra hafahafa any amin’ny fiarahamonina misy azy any avy,mba hampandre ny tomponandraikitra akaiky azy ary tsy ho resin-tahotra fa tsy ho fantatra ny momba azy raha ny valifaty no atahorany.